नेकपा र सुर्य चिन्ह आफुले राख्ने यस्तो छ ओलीको योजना, पार्टी नै निलम्बन गर्न सक्ने ! - Prahar News
नेकपा र सुर्य चिन्ह आफुले राख्ने यस्तो छ ओलीको योजना, पार्टी नै निलम्बन गर्न सक्ने !
काठमाण्डौ - पछिल्लो समय पार्टीको केन्द्रीय समितिमा मात्र होइन, प्रधानमन्त्री ओली स्थायी कमिटी र सचिवालयमा समेत अल्पमतमा थिए । त्यसैले उनले पार्टीको वैधानिकता प्राप्त गर्नका लागि ६० प्रतिशत बहुमत केन्द्रीय समितिबाट जुटाउन असम्भवप्रायः छ ।
सत्ताको प्रभावले उनले अर्को पक्षलाई पनि ६० प्रतिशत बहुमत जुटाउन नदिन सक्ने सम्भावना भने प्रबल देखिन्छ । सत्ताको प्रभाव देखाएर उनले आफ्नो पक्षमा ४० प्रतिशतभन्दा बढी र ६० प्रतिशतभन्दा कम केन्द्रीय सदस्य जुटाएको अवस्थामा नेकपाको वैधताबारे निर्वाचन आयोगलाई
छिनोफानो गर्न जटिल नै हुन्छ । निर्वाचन आयोगमा उनले हालैको संवैधानिक परिषद बैठकबाट आफ्ना निकटकालाई नियुक्त गरेको भए पनि आयोगले कानुनी आधारविना दलको वैधानिकता कसैलाई सुम्पन सक्दैन ।
जानकार स्रोतका अनुसार यस्तो अवस्थामा निर्वाचन आयोगले नेकपा नाम गरेको दललाई ‘वैधताको टुङ्गो नलागेसम्मका लागि’ भन्दै निलम्बन गर्न सक्नेछ । आयोगले यस प्रकारको निर्णय गर्नु पनि ओलीकै योजना अनुसारको एउटा कदम हुन सक्ने स्रोतको भनाइ छ ।
पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त उप्रेती पार्टी वैधताको विवाद नटुंगिएको अवस्था र चुनाव निम्तिसकेको अवस्थामा त्यस्तो दललाई निर्वाचन प्रयोजनमा प्रयोग हुनबाट रोक्न सक्ने व्यवस्थालाई ‘क्रिटिकल’ मान्छन् । यसबारेमा आफूले अहिले यस्तै हुन्छ भनेर भन्न नसक्ने उनको भनाइ छ ।
दलभित्र वैधानिकताको झगडा निमिट्यान्न भइनसकेको अवस्थामा आयोगले दुवै पक्षलाई वैधानिकता नदिइ छुट्टै दलका रुपमा निर्वाचनमा सहभागी हुन आग्रह गरेमा आश्चर्य मानिरहनु नपर्ने जानकारहरु बताउँछन् ।
पूर्व प्रमुख आयुक्त उप्रेती भने पार्टी विभाजन भइसकेपछि केन्द्रीय समितिको अधिकांशले हामीसँग यति सदस्य छन्, हस्ताक्षर यो हो, नागरिकता यो हो, विधि विधान यो हो र हाम्रो केन्द्रीय कमिटीको निर्णय यो हो भनेर ५० भन्दा बढी केन्द्रीय सदस्य संख्या देखाएर यो पार्टी पाउनुपर्छ भनेर
आयोगमा पेश गरेपछि त्यस्तो पक्षले अधिकार प्राप्त गर्ने जिकिर गर्छन् । बाँकी रहेको अर्को समूहले नयाँ पार्टी खोल्न, दर्ता गर्न र नयाँ चुनाव चिह्न लिएर चुनावमा जान पाउने उनको तर्क छ ।
यस्तो छ ओलीको उद्देश्य
प्रधानमन्त्री ओलीले आफू इतर समूहलाई राजनीतिक रुपमा तेजोवध गर्न हरसम्भव प्रयास गर्ने जानकारहरुको भनाइ छ । यसका लागि उनले निर्वाचन आयोगलाई प्रभावित गरेर सकेसम्म नेकपाको वैधता आफूले लिने, त्यो सम्भव नभए अर्को पक्षलाई वैधता दिनबाट रोक्ने अनेक प्रयास गर्नेछन् ।
सोही प्रयास अन्तर्गत आफ्नो बहुमत नपुग्ने अवस्थामा उनले आगामी निर्वाचनसम्म नेकपाको वैधता टुंगो लगाउन नदिन निर्वाचन आयोगलाई प्रयोग गर्नेछन् । परिणामस्वरुप आयोगले नेकपाका दुवै समूहलाई अर्को दलबाट चुनावी प्रतिस्पर्धामा जान निर्देशन दिन सक्छ ।
त्यो अवस्थामा ओलीले गत भदौमै निर्वाचन आयोगमा दर्ता गर्न लगाएका नेकपा एमाले दलबाट चुनावी प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् । प्रचण्ड–नेपाल समूहलाई त्यो अवस्थामा संकट निम्तिन सक्छ । किनकि उनीहरु नयाँ दल दर्ता गर्नुपर्नेदेखि लिएर चुनाव प्रचार, चुनावी रणनीति बनाउनुपर्ने अनेक चुनौतीलाई थोरै समयावधिमा झेल्नुपर्ने दबाबमा पर्न सक्छन् ।
पार्टीको वैधताको छिनोफानो गर्ने निकाय निर्वाचन आयोग नै भएको बुझेर नै ओलीले हतारमा संवैधानिक परिषदको बैठकमार्फत आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिससमेत गरिसकेका छन् ।
यस्तो भन्छन कानुन व्यवसायी
कानुन व्यवसायीहरूले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्कमल दाहाल प्रचण्ड’ र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको संसद विघटन निर्णय असंवैधानिक हुने बताएका छन्।
अध्यक्ष प्रचण्ड, नेता नेपाल र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले सोमबार सिंहदरबारमा कानुन व्यवसायीसँग छलफल गरेका थिए । उक्त छलफलमा बोल्दै कानुन व्यवसायीहरू युवराज संग्रौला, टीकाराम भट्टराई, शम्भु थापालगायतले प्रधानमन्त्रीले गरेको संसद विघटनलाई मान्यता नदिन आग्रह गरेका हुन्।
‘संविधानमा संसद विघटनका केही निश्चित परिस्थिति छन्। अहिले ती कुनै पनि परिस्थिति छैनन्। यो संसद विघटन हुँदै होइन। तपाईंहरूले यसलाई मान्यता नदिनुस् भन्यौं,’ छलफलमा सहभागी बरिष्ठ अधिवक्ता एंव राष्ट्रिय सभा सदस्य रामनारायण विडारीले भने,‘संसद विघटन नभएकाले अहिले पनि राष्ट्रपतिलाई अधिवेशन आह्वानका लागि आग्रह गर्न सकिन्छ।’
छलफलमा सबै कानुन व्यवसायीले समान खालको धारणा राखेको विडारीले जानकारी दिए । कानुन व्यवसायीहरूका कुरा सुनेपछि नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डले यसबारे आजै बेलुकीसम्म आफूहरू निर्णयमा पुग्ने बताएका छन् ।‘कांग्रेसले आज सर्वदलीय बैठक राखेको छ। अपरान्ह ४ बजे उक्त बैठक छ। त्यसपछि हामी सामूहिक निर्णय गर्छौं,’ प्रचण्डले भने।
सोमवार, पौष ६ २०७७०१:३२:५०